Madaxweyne ku xigeenka Somaliland, Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici
HARGEYSA, Somaliland – Madaxweyne ku xigeenka Somaliland, Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici, ayaa Isniinta maanta ah, wuxuu ku dhawaaqay in dheecaanada dad ay uga shakiyeen Coronavirus ay u direen dibada.
Saylici oo hogaamiya guddiga maamulka u qaabilsan ka hortagga xanuunkaas ayaa shaaca ka qaadey in tiradda shaqsiyaadkaas ay gaareyso saddex qof, oo uu ku jiro nin u dhashay Shiinaha, oo ah xudunta cudurka.
Isagoo wariyeyaasha kula hadlay magaalada Hargeysa ayuu intaas ku daray in ay karantiil geliyeen saddex kale oo kasoo gudbay xadka Jabuuti.
"Saddexdaas qof waxaa lagu arkay astaamaha oo ay kamid tahay xumad [qandho] badan, waana la baarayaa," ayuu hadalkiisa raaciyey.
Mar uu soo hadal-qaadey dadka ay dejiyeen huteelada caasimada markii lagu tuhmay fayruska, Saylici ayaa meesha ka saarey in xubnahaas ay kasoo ifbaxeen calaamadaha lagu garto cudurka.
"Hoteelada dadkaan ku hayno, illaa hadda cidna laguma arag calaamad, taxadirkeedana waan qabnaa," ayuu ku adkeystay.
Somaliland ayaanan wali hirgelin goobaha karan-tiilka, taas bedelkeeda dadka la tuhmo waxaa la dejiyaa huteelo ay qarashka maalinlaha ah iyaga iska bixinayaan. Muda huuriska caabuqa waa 14-maalmood.
Shalay ayay ahayd markii Jamhuuriyada Jabuuti ay ka shanqarisay in saddex ruux oo kaga yimid dhanka Somaliland ay ka heshay Covid-19. Bukaanada oo xadka dhulka "kasoo gudbay ayaa ah muwaadiniin Jabuutiyaan ah".
Hadalka Mas'uulkan ayaa kusoo beegmaya xilli dhawaan war kasoo baxay Puntland lagu...
Coronavirus oo xoojiyey kala qeyb-sanaantii ka jirtay Somaliland
Somaliland 05.05.2020. 09:02
DF oo lagu eedeeyay in ay siyaasadeyneyso ka hortagga Corona
Somaliland 14.04.2020. 19:10
Somaliland oo si ku meelgaar ah xanibaad ugu soo rogtay Qaadka
Somaliland 23.04.2020. 14:45